एकैदिन भारतमा चार लाखबढी कोभिड सङ्क्रमित | Himal Times
Home Flash News एकैदिन भारतमा चार लाखबढी कोभिड सङ्क्रमित
एकैदिन भारतमा चार लाखबढी कोभिड सङ्क्रमित
एजेन्सी। भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको सङ्ख्या विगत २४ घण्टामा चार लाख नाघेको छ ।
योसँगै अहिलेसम्म देशभरी कूल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ९१ लाख ६४ हजार ९६९ पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका कारण सोही अवधिमा तीन हजार ५२३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकोे छ । भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरूको कुल सङ्ख्या दुई लाख ११ हजार ८५३ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अहिले पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको सङ्ख्या ३२ लाख ६८ हजार १७० रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा दुई लाख ९९ हजार ९८८ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्का अनुसार भारतमा अहिलेसम्म २८ करोड ८३ लाख ३७ हजार ३८५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
Previous articleमलेसियाबाट नेपाल आउदा के गर्ने? मलेसियामा अबैधानिक्लाई २ महिना बाँकि ! (भिडियो)
Next articleकोरोना नियन्त्रण मापदण्ड उल्लंघन गर्ने ८ सय २४ जनालाई जरिवाना
अवैध रुपमा सगरमाथा पुग्न सहयोग गरेको सिम्रिक एयरलाई कारबाहीको तयारी
Himaltimes - January 13, 2021
राक्सिराङको विकट गाउँमा बन्यो सुविधासम्पन्न प्रहरी चौकी भवन
मलेसिया लगायत विदेशबाट फर्कने हवाई भाडा घट्याे
मलेसियामा निधन भएकी म्यादीकी चन्द्र कुमारीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग